Raha ny fanazavany dia taksibe mihazo an’Ambohidratrimo no nandehanany. Teo Ambohibao vao niditra tao anatin’ilay fiara nandehanany ilay lehilahy iray manodidina ny 30 taona tsikariny ho nanao ilay zavatra. Nomarihiny fa nanao akanjo lava tanana nanafenany ny zavatra nanindronany azy io. Niezaka nisisika mafy teo akaikiny ity lehilahy ity sady nanindry mafy ny ilan-tanany an-kavanana. Tsy afa-nihetsika ilay renim-pianakaviana saingy voakifiny ihany avy eo. Tafavoaka ilay taksibe ihany izy rehefa tonga teo amin’ny toerana tokony ho nialany. Vao tonga tany am-piasana anefa izy dia fanina. Nahatsiaro nafana ihany koa izy ka nanala akanjo kinanjo ny sandriny efa mangana no hitany niampy diam-panjaitra be. Nambaran’ity renim-pianakaviana ity fa nivandravandra azy io lehilahy naka ra azy io tamin’ny fotoana nialany tao anaty taksibe sady nanamboatra zavatra tamin’ny tanany. Manao antso avo amin’ny minisiteran’ny mponina ny mpampiasa ity renim-pianakaviana ity mba handray ny andraikiny. Toraka izany koa ny minisiteran’ny fahasalamana sao sanatria lasa bizina ny fakana ra ankehitriny satria efa mahatratra 80.000 Ar ny paosy iray.